I-iphone 12 lelona hlabathi kunye neefowuni ezithengisa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku ngo-2021 kunye ne-galaxy s21 ayikho & kufutshane
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-iPhone 12 lelona hlabathi kunye neefowuni ezithengisa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku ngo-2021 kunye neGPS S21
I-iPhone 12 lelona hlabathi kunye neefowuni ezithengisa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku ngo-2021 kunye neGPS S21
Umnxeba we-iPhone 12 ube yimpumelelo enkulu ukusukela oko yasungula ngo-Okthobha ophelileyo, ke ayizukumangalisa ukuyiva loo nto apile 'Iifowuni ze-flagship ezintsha zilawula ngokupheleleyo kwiimarike ngeendlela zonke kwikota yokugqibela.
I-iPhone 12 yayiyeyona smartphone ithengiswa kakhulu kwihlabathi kwi-Q1 2021
Umgangatho we-Apple I-iPhone 12 5G Imodeli yayiyeyona nto ithengiswa kakhulu kwihlabathi kwikota yokuqala ye-2021 kwaye yabalwa nge-5% yeenqanawa ezithunyelwe kwihlabathi liphela ngeli xesha. Yalandelwa kwindawo yesibini ekufuphi kwinqanaba eliphezulu le-iPhone 12 Pro Max, ebambe isabelo sentengiso se-4%.
I-iPhone 12 Pro yayisisisixhobo sesithathu esithengisa kakhulu kwaye yongeza enye i-3% yesabelo sentengiso kwiitotali zika-Apple. Ungalindela ukuba i-iPhone 12 mini igqibe uluhlu oluphezulu lwe-4, kodwa ayisiyiyo le yenzekileyo. Icompact ye-iPhone inayo yaqhuba kakubi kakhulu ukuba ayikhange yenze ne-10 ephezulu.
Ibiphantsi kwendala (kwaye ngexabiso eliphantsi) i-iPhone 11 yokugcwalisa isikhewu. Ifowuni ikwazile ukubamba ngaphezulu kwe-2% yokuthunyelwa kwehlabathi, ngokwaneleyo ukuba iqinisekise ukuba ikwindawo yesine ecaleni kwezinye Iifowuni ezilungileyo kwi2021 .
Uphando lweNqaku Inike impumelelo ye-Apple kwimfuno eqinileyo yeefowuni ze5G kunye nokulibaziseka kokuthengwa kwe-smartphone ukusuka kwi-2020, isiphumo ngqo kubhubhane wehlabathi.
Iindawo ezisele kuluhlu oluphezulu lwe-10 ngevolumu ziye kuXiaomi kunye Isamsung , abalwe ngayo nezixhobo zabo zohlahlo-lwabiwo mali. Indawo yesihlanu, yesithandathu neyesibhozo yaya eXiaomi kunye neRedmi 9A, Redmi 9, kunye neRedmi Qaphela 9 ngokwahlukeneyo.
I-Redmi 9A iqhube kakuhle kakhulu e-China nase-India, ngelixa i-vanilla Redmi 9 ifumene impumelelo kwiimarike zase Mpuma Asia.
Isamsung yathatha isixhenxe ngeGreen A12, yethoba ngeGalaxy A21s, kunye neyeshumi ngeGalaxy A31. Ibango lezi zixhobo laligxile eIndiya, eLatin America, kuMbindi Mpuma naseAfrika.
Iifowuni ze-Apple ze-2020 zenza i-35% yayo yonke ingeniso ye-smartphone
Ukulinganisa ukusebenza kweemarike ze-smartphone ngengeniso kutshintsha izinto. Ngaphandle kokubalwa kwemali 'kuphela' ye-4% yevolumu, i-iPhone 12 Pro Max ivelise i-12% emangalisayo yayo yonke ingeniso ye-smartphone kwikota ephelileyo.
I-iPhone 12 ibonakalise i-11% eyongezelelweyo yengeniso kunye ne-iPhone 12 Pro elandelwa ngesabelo se-9%. Idityaniswe ne-iPhone 12 mini kunye ne-iPhone SE, iimodeli ze-Apple 2020 ze-Apple zodwa ezithathe i-35% yengeniso yehlabathi. Owu, kunye ne-iPhone 11 eyaziwayo yenze enye i-3%.
Akukho nanye imodeli yeGPS S21 eyenze i-10 ephezulu ngokwevolumu, kodwa zontathu iimodeli zivele kwitshathi yengeniso. I-Galaxy S21 Ultra ithathe indawo yesihlanu nge-3% ebekekileyo. I-Galaxy S21 igqibile ngekota nge-2% yengeniso kwaye i-Galaxy S21 + ilawule i-1% eyongezelelweyo, izisa Uthotho lwe-Samsung Galaxy S21 zizonke zaya kwi-6% kwi-Q1 2021.
IHuawei's Mate 40 Pro yathatha indawo eseleyo kwi-10 ephezulu ngesabelo se-2%. Kuyamangalisa ukuqaphela ukuba i-smartphone ifumaneke kuphela e-China, kodwa isenokuba lixesha lokugqibela sibona ifowuni ye-Huawei kuluhlu.
Uphando lweNqakuIbango lokuba impumelelo yezi flegi inyanzelise ingeniso ye-smartphone engaphezulu kwe- $ 100 yezigidigidi kwi-Q1 2021, iseta irekhodi yekota yokuqala. Ngaphandle kwe-Apple 11 ye-Apple kunye ne-iPhone SE, kuyacaca ukuba i-5G ngokukhawuleza iba ngumgangatho kwimarike yeprimiyamu.
verizon lg v20 umhla wokukhutshwa
scp ukukhuphela ifayile kude kude nendawo
I-AT & T iqala ukukhupha uhlaziyo lwepie 9.0 kwi-Samsung Galaxy S8 / S8 + kunye neNqaku 8
Ungayitshintsha njani imibala yokwazisa yefowuni yakho & apos; ukukhanya kwe-LED
Ngaba iFortnite Mobile iya kufumaneka kwezi zixhobo ze-Android? Asicingi njalo
I-Apple iPad mini 3 vs Apple iPad mini 2 vs Apple iPad mini: ubungakanani kunye nokuthelekiswa kwe-specs
Ezi zezona zibalaseleyo, kwaye zihlala zomelele ngoku (2021 uhlaziyo)